तंग्रिदै गरेका बालेनलाई तनाव हुनेगरी जादाजादैं मन्त्री झाँक्रीले किन गरिन् यस्तो घोषणा ? | Prahar News
तंग्रिदै गरेका बालेनलाई तनाव हुनेगरी जादाजादैं मन्त्री झाँक्रीले किन गरिन् यस्तो घोषणा ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह विस्तारै फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर तग्रिदैछन् । बालेनले यसको तत्कालको व्यवस्थापन र दीर्घकालिन् व्यवस्थापनका लागि अनेकन उपाय खोजिरहेका छन् । काठमाडौं महानगर एक्लैले यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । यसका लागि केन्द्र सरकारसँगको समन्वय र प्रोत्साहन जरुरी छ ।
तर यता केन्द्र सरकारका मन्त्री शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भने बालेनलाई हतोत्साहित बनाउने घोषणा गरेकी छन् । सिसडोलबासीसँग समझदारी हुँदा समेत सबै जस आफैले लिन खोजेकी मन्त्री झाक्रीको पद अहिले धरापमा छ । यही कारण पनि उनी अहिले हतोत्साहित बनाउने घोषणा गर्दै हिडेकी छन् ।
झाक्रीले शहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताएकी छन् । बिहीबार काठमाडौंमा टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या एकजना गरिबको समस्यालाई निवारण गर्ने भन्दापनि ठूलो रहेको बताएकी हुन् ।
मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौंका मानिसले गरेको फोहोर बञ्चरे डाँडामा लगेर फालिने भन्दै त्यसबाट निस्किने सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले शौचालयको फोहोर ढलमा र ढल खोलामा लगेर मिसाउने गरेको भन्दै यस किसिमको नीति नियमको बाटो सुल्टो नभएको बताइन् । फोहोर र ढलका समस्यालाई समाधान गर्न ऋण लिएर भएपनि समाधान केन्द्र बनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘शहरमा आइसकेपछि शहरका समस्या झनै विकराल छन् । शहरमा बस्ने मान्छेले फोहोर गर्छन्, फोहोर विसर्जन गर्ने समस्या एकजना गरिबीको जीवनलाई निवारण गर्नेभन्दा झनै ठूलो समस्या छ । शहरमा बस्नेले फोहोर उत्सर्जन गरिरहेका छन् । आफूले गरेको फोहोर ढल, ढलबाट खोलामा सुक्खा फोहोरहरु बाहिर ल्याएर चोकमा थुपार्ने संस्कृति बढेर आएको छ, त्यसले हाम्रो गरिबीलाई घटाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको शक्ति, सामथ्र्य, ऋण, पैसा, आम्दानी सबैकुराको अतिरिक्त खर्च यसको व्यवस्थापनमा लागेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ । काठमाडौंमा बस्ने मान्छेले फोहोर गर्दछौं । बञ्चरे डाँडामा सम्पूर्ण फोहोरका लागि ल्याण्डफिल्ड साइट बनाएका छौँ ।’
उनले थपिन्, ‘फोहोर फालेका छौँ, त्योसँग निस्किने सामाजिक मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले ट्वाइलेटहरु ढलमा मिसाएका छौँ । ढल खोलामा मिसाएका छौँ । त्यसको ट्रिटमेण्ट गर्न त्यत्तिकै संख्यामा ऋण लिएर ट्रिटमेण्ट प्लान्ट बनाउनुपर्छ । यो हामी सुल्टो बाटो हिँडेको होइन, तरपनि यो हाम्रो बाध्यता हो । हामीले अब जसले फोहोर गर्छ उसैसँग पैसा उठाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेनौँ भने पुस्तौं पुस्तासम्म ऋणको भारी अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।’
यसका साथै मन्त्री झाँक्रीले असफलताबाट सिकेको पाठलाई अब नयाँ ढंगले अघि लैजान आवश्यक रहेको पनि बताइन् । इक्षुमती वा तुखुचा ९अपभ्रंस टुकुचा० खोला काठमाडौंको मध्यभागबाट बग्ने गर्छ । तर अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण खोला प्रदूषित र अतिक्रमण भएको छ । ट्रिटमेण्ट प्लान्ट बनाएपछि फोहोर पानी प्रशोधन हुने र त्यसलाई वागमती नदीमा मिसाउने योजना रहेको छ ।